Kidnapping Tsaratanàna - Manahy ny vadin’ny maty sao havotsotra ilay kandidà - Midi madagasikara du 4 avril 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Lutte contre la corruption à Madagascar Kidnapping Tsaratanàna – Manahy ny vadin’ny maty sao havotsotra ilay kandidà –...
Kidnapping Tsaratanàna – Manahy ny vadin’ny maty sao havotsotra ilay kandidà – Midi madagasikara du 4 avril 2019
Nisafidy ny hiteny amin’izay ny vadin’ilay kandidà ho depiote ao Tsaratanàna izay maty novonoin’ny mpaka an-keriny. « Tsiahiviko fa efa nandoa vola 20 tapitrisa ariary, araka ny fitakian’ireo olon-dratsy kanefa dia mbola notifirina ho faty ihany vadiko. Ankehitriny koa dia mandeha be ny feo fa misy mikasa ny hamotsotra ilay kandidà izay voarohirohy ho atidoha nikotrika ny fakàna an-keriny ny vadiko ka niafara tamin’ny famonoana ho faty azy », araka ny filazan’ny vadin’ny maty, Ramatoa Miora Andriamaholy. Aminy dia antony ara-pôlitika kokoa no nitranga fa tsy fakàna an-keriny tsotra. Raha io farany io mantsy no tena tanjona dia navotsotra ilay olona rehefa naloa ny vola fa tsy novonoina. « Niady toerana mba ho kandidà hatolotry ny antoko no fijeriko azy », hoy hatrany ny fanazavan’ny vadin’ny maty. Raha tsiahivina dia olona fito amin’izao fotoana no efa nidoboka am-ponja ao Mahajanga. Ny tena porofo mitohoka amin’ny tenda dia ny nahitàna ny finday sy ny « puce téléphonique » teny amin’ny dahalo iray izay matin’ny FIGN nandritra ny savahao tany anaty ala. Io no nahafahana nisambotra ireo mpiray tsikombakomba hafa ary hatreto dia ilay kandidà mpifaninana tamin’ny maty no voatazona ho tao ambadiky ny rehetra. Mialokaloka amin’ny fizakany zom-pirenena roa (double nationalité) ilay olona ary eo indrindra ny feo mandeha ankehitriny – izay tonga eny am-pototsofin’ny fianakavian’ny maty – ny amin’ny mety ho fisian’ny masoivoho vahiny miaro azy. Ity angamba ny fifidianana nialohavan’ny heloka bevava betsaka indrindra. Nisy ny kandidà maty, nisy koa ny kandidà voarohirohy tamin’ny fakàna an-keriny sy vonoan’olona ary nidoboka am-ponja. Tsy vitan’izay fa mbola nisy koa ny kandidà efa nidoboka am-ponja, kanefa nomena fahafahana vonjimaika indray dia afaka nanohy ny firotsahany. Momba io tranga farany io dia niteraka ny fampitsaharana tamin’ny asany ny mpitsara efatra izay namoaka ny didy fahafahana vonjimaika izany. Amin’ireo tranga rehetra ireo dia tsy nisy sakana mihitsy ny dosie izay napetraka eny anivon’ny komisiona misahana ny fifidianana na koa ny fitsaràna miandraikitra izany, ary dia nekena avokoa hatreto ny filatsahan-kofidiana…
A Madagascar, le nouveau président arrête des proches de l’ancien président – Le monde du 14 février 2019
Fanjakana Andry Rajoelina : Miady amin’ny mpandraharaha sa ny kolikoly – La gazette de la grande île du 19 février 2019
Article précédentSuspension des magistrats et détention des responsables du service foncier – Intransigeance du ministre de la Justice – Expressmada du 3 avril 2019
Article suivantPoint en vidéo sur les responsables de l’administration foncière malgache emprisonnés
Tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka malagasy hoy ny filoha...
Conférence de presse du Procureur de la République concernant l’affaire Houcine...
Tontolon’ny fitsarana : Nanatanteraka fianianana ny PGCS vaovao Andriatianarivelo René José...
La lutte contre la corruption engagée par l’actuel régime fait jaser...
Madagascar – Raharaha Houcine Arfa Hanadihady ny minisitry ny Fitsarana ny...
Affaire Houcine Arfa : Liberté provisoire pour le juge d’instruction (Haingo...